MaChina Maglev Anodzidzisa Kuti Asvike 1000 Km / Awa Achaunza pa2020 - RayHaber
mushaTHE WORLDASIA86 ChinaZvitoro zve Maglev zveChina Kukusvitsa 1000 Km Per Hour Kuti Tipe ku2020
Zvitoro zve Maglev zveChina Kukusvitsa 1000 Km Per Hour Kuti Tipe ku2020
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 86 China, ASIA, THE WORLD, Railway, GENERAL, Fast Train, musoro wenyaya 0
Zvitima zvinosvika kumhanya kwemakanda zvichaiswa mukushandira
Nhasi, uko zvitima zvekumhanya zvakanyanya zvawanda, China inoramba ichishanda zvisina basa kune zvitima zve maglev zvine prototype yavo yakaunzwa mumwedzi ichangopfuura. Mune mamiriro aya, kuedza kwekutanga kuchaitwa pakutanga kwe2020.
China yagara iri nyika inoongorora nekumhanya zvakanyanya maererano nechitima chechitima. Panguva ino, nyika yatove kumusha kune mamwe echitima anomhanya kwazvo munyika uye ari kugadzirira kutora chiteshi chechitima kusvika kumafirimu esainzi firimu uchishandisa simba rayo rekunzika.
Zvinyorwa zvichangoburwa zvinoti njanji dzemaglev dzichaiswa mumatunhu epakati peChina, idzo dzave kuita gadziriro mumakore apfuura, kubva kutanga kwegore rinouya. Sekutaura kwemishumo, zviremera pari zvino vari kuita zvidzidzo zvekugona kutanga chirongwa ichi.
Kana zvese zvikafamba maererano nechirongwa, rwendo kubva kuGuangzhou, China kuenda kuBeijing kunogona kuitwa nekumhanya pakati pe600 km ne1.000 km neawa, zvinoreva kuti zvitima zvekumhanya zvakanyanya zvinowanikwa zvichange zvakakwira kupfuura iyo 350 km / h. Zvakare, iyo Asia Times yakati, zvakare, kuti 2.200-km rwendo kubva kuWuhan kuenda kuGuangzhou inogona kuderedzwa kusvika kunenge maawa maviri.
Maglev zvitima, izvo zvinotora simba rese kuburikidza neyemhepo mhepo cushion, kuderedza kupokana kusvika zero uye kusvika kumhanya izvo zvaimbove kusingabviri. Iyo yakanyanya kumhanya yezvitima zve Maglev parizvino iri kushanda muChina ndeye 430 kilomita paawa. Nekudaro, nehunyanzvi hwakagadziriswazve, aya ekumhanyisa anotarisirwa kusvika ku600 kusvika ku1.000 kilomita neawa.
Tichifunga nezve nzvimbo iri pamusoro peChina, zvinokwanisika kutaura kuti maguta ari kure zvikuru. Naizvozvo, zvitima zvinoshanda neiyi tekinoroji zvinoita kuti madhiri ari pakati pemaguta ave asina chinangwa uye ave pedyo nekuvasvitsa padanho rinogona kukwikwidza nendege.
China haisiriyo nyika chete munyika inofarira zvitima zvemaiglev, asi Japan yaitozivikanwa kuti iri kushanda kumatima avo ezve maglev. Nekudaro, zvataurwa munguva pfupi yapfuura zvinoratidza kuti Germany neUnited States vari kushandawo pane avo materu maglev echitima. (Webtekno)
China High High Speed ​​Target 1000 Per Hour | Maglev 30 / 11 / 2012 China High High Speed ​​Target 1000 Per Hour | Mari yeMaglev iri kutora matanho chaiwo zvakakosha mune zvose zvinokura China. Kusvikira kune chinangwa che2020 munyika kuti kuwedzere mutengesi uye kukurumidzira kusvika kune 1000 km munyika, kunyanya chimwe chezvimwe nzira dzakagadziriswa pane zvigadziriswa nehupenyu hwekusvibiswa kwemagetsi. Gore roga rega makambani akawanda uye akawanda anogadzira uye anotengesa magetsi kana mavara emhando. Zvisinei, kune matambudziko asingakwanise kugadziriswa nemagetsi mumhizha yemotokari. Semuenzaniso, motokari uye nguva dzinokurumidza. Saka, nyika dzichiri kusimukira dziri kutendeukira kune imwe nzira isiri inotungamirirwa nemotokari inogona kufamba nokukurumidza marefu marefu. Dolayısıyla
China Inotaridza Zviratidzo zveMaglev Dzidzirai Kurumidza 600 Mileage Per Hour 23 / 05 / 2019 China yakaunza chimiro chetsika ye maglev, iyo inofamba pa600 mairaira neawa. Maglev inoshandiswa kwezvitima zvinofamba pasina kubatana nemirairi kuburikidza nekushandisa magnetic kusimudzira simba. China Central Television (CCTV), shandende yerudzi rweShandong yeQingdao muguta reXinx ichafamba neawa imwechete inofamba yechitarisiko chemotokari yemaglev pane imwe sangano rinotaridzirwa. Iyo purojekiti yakagadzirwa neChina kambani yehurumende China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC). VaDing Sansan, nyanzvi huru yekambani iyi, vakati vanogona kuedza magetsi ekugadzirwa kwemuenzaniso uye zvigadzirwa zvekombiki zvinokosha zvepamusoro-soro maglev. 'STATIC SHIELD' Nzvimbo yehutano hwebasa reunyanzvi hweSATAT
1000 Km neawa yekuita kuti chitima chiende nokukurumidza 19 / 06 / 2012 Kubudirira kweChina mumunda wekutakura kunoenderera mberi nekukurumidza. Chinangwa chitsva chevashandisi vechiChinese ndechekuita chitima chinogona kufamba nekukurumidza kwe1000 paawa. China, nyika yakawanda kwazvo munyika yose, iri kuisa mari zvikuru mumigwagwa kuti igadzirise zvinetso zvekutakura. Kukosha kwezvitima zvinokonzerwa nemagetsi kuwedzera sezvo kuwandisa kwemafuta kunoderedza uye kutengesa kuwedzera. Sangano reChina Academy of Sciences uye Chinese Academy of Engineering rinoreva kuti pfungwa yekutakura vanhu inogona kuchinjwa zvachose nechitima mukati memunyika. Maererano nemushumo wakabudiswa muBeijing Times, vashandisi vechiChinese vanoshanda pachitima chinogona kufamba 1000 maira neawa. Ichashanda sei? Chitima ...
Nzira itsva dzeSamray dzichaendeswa muna December 17 / 10 / 2013 Nzira itsva dzeSamray dzichaendeswa munaDisemba: 2010 light rail system yakatanga rwendo rwayo rwokutanga mu Samsun mu3 nhasi. akapemberera makore ake. Sangano 3 rakaunza vatengi vanosvika mamiriyoni e47 gore negore. Iko mari yeprojekiti iyi inenge ye110 mamiriyoni emadhora, inotsigirwa ne16 tram uye 28 mabhasi uye inoshandiswa naSamsun Transport Inc. (SAMULAŞ). Gore reRepublic Square Station rakaparidzirwa kune vagari venyika. Kuparidzirwa kwekuparadzisa kwakapiwawo kune 3 mamiriyoni aifamba achiuya panzvimbo yacho neSunun Metropolitan Munyori Mukuru Sefer Arlı. DZIDZIDZO ITSVA MUDECEMBER 47 3 Mamiriyoni DA
Gaziantep Airport New Teminal Building Inotangwa Mu 2020 30 / 12 / 2018 Mehmet Cahit Turhan, Mutungamiri wekutengesa uye Infrastructure, uyo akauya kuGaziantep kwekushanyirwa kwevakashanyira uye vanofambidzana, akaongorora mabasa anoramba achienderana nekuwedzera kweGaziantep Airport Terminals uye kuvaka kwechivako chitsva chekuguma uye akagamuchira ruzivo kubva kuvane masimba. VaTurhan vakataura nhengo dzemapepanhau mushure mekutsvakurudza, Gaziantep Airport New Terminal building ichazarurirwa mugore re2020 yakati: "Gaziantep ibasa rinokosha mumhepo yekufambisa ndege yedu kuti iwedzere magumo edu. 6 inosanganisira mamiriro matsva nemabhanhire anowedzera.
Yekumhanya Yekudzidzira Hike
Iye achauya kuBursa uye agare panzvimbo yekuvaka
China High High Speed ​​Target 1000 Per Hour | Maglev
China Inotaridza Zviratidzo zveMaglev Dzidzirai Kurumidza 600 Mileage Per Hour
1000 Km neawa yekuita kuti chitima chiende nokukurumidza
Nzira itsva dzeSamray dzichaendeswa muna December
Gaziantep Airport New Teminal Building Inotangwa Mu 2020
Ankara Niğde Highway ichaiswa mubasa mu 2020
Kayseri High Speed ​​Line ichashandiswa paC2020
Madzimai anonzi Patriots Anonyanya Kuchenjerera Paanoshandisa Matanda Anosvika 70 Tone